Fikarohana momba ny firaisana Famolavolana fomba fiaina sy fifandraisana havaozina amin'ny alàlan'ny Reincarnation-Fampidirana - Fikarohana Reincarnation
Ny fikarohana momba ny sehatry ny Reincarnation dia mampiseho fa ny fanahy dia afaka manao drafitra mandritra ny androm-piainana mba ho tafaraka amin'ny havan-tiana, anisan'izany ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainam-pianakaviana taloha. Ny fanahin'ny olona dia mety ho teraka ao anatin'ny fianakaviana samihafa saingy eo akaikin'ny fiainan'ny fianakaviana taloha, izay mamela ny fiverenana indray. Ireo karazana tranga ireo dia mampiseho fa mamolavola fiainana lava isika.
Ny ray aman-dreny ho avy dia afaka mianatra fa ny fanahy manokana izay ho lasa zanany amin'ny alalan'ny nofy, izay ahafahan'ny fanahy mifandray amin'ny ray aman-dreny amin'ny hoavy. Ian Stevenson, MD, nantsoina ireo karazana tranga ireo: Famelabelarana ny nofy
Ny mariky ny fanambarana ny nofy dia maneho sarintany iray, amin'ny drafitra ny diantsika mandritra ny androm-piainantsika mba hihaona amin'ireo olon-tiantsika, manatanteraka karma ary mandray anjara amin'ny tetikasa.
Fitoriana vohoka eo amin'ny sehatry ny fanambadiana